Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || उफ ! डेंगे – kayakairan.com
उफ ! डेंगे
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:४१
देशभर डेंगे आतंक छ । पहिले चितवनलाई यसको ‘राजधानी’ नै मानिन्थ्यो । उहिल्यै । यसपालि त चितवनलाई अरु ठाउँले जितिदियो । पूर्वी नेपालको धरानबाटै यसको थालनी भयो । सर्दै–सर्दै अहिले त पश्चिमसम्मै पुग्यो । चितवन छुट्ने कुरै भएन । चितवनमा अहिले आपत् छ । विपत् छ । डेंगेले तनाव छ ।
अस्पतालमा थामिनसक्नुको भीड छ । भाइरलले मान्छे ढलेका ढल्यै छन् । बेडसम्म पाइएको छैन । नियन्त्रणमा कसको प्रयास निर्णायक हुने हो त्यो पनि थाहा छैन । केन्द्रीय सरकार भन्छ–“नियन्त्रणमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन ।” विचरा प्रदेश सरकारलाई मेसोमेलो छैन । स्थानीय सरकारलाई त यो ठूलो कुरै लाग्दैन । कसले के गर्ने हो अन्यौल छ ।
केही गरेन होइन, ग¥यो । भरतपुर महानगरले ग¥यो । शनिबार महानगरपालिका कार्यालयले गन्यमान्य मान्छे सडक उता¥यो । डेंगेबाट बचौं भन्यो । सडक ¥याली ग¥यो । प्रभातफेरि भन्यो क्यारे ! ¥याली भनेको चेतना फैलाउने एउटा माध्यम हो । यसबाट केही न केही सूचना प्रवाह पक्कै हुन्छ । कसैले न कसैले केही न केही थाहा पाउँछन् । तर, सामान्य अवस्थामा यो विधि काम लाग्छ । महामारी नै फैलिएपछि ¥याली गर्ने होइन । भाषण गर्ने होइन । आमसभा गर्ने होइन । घरघरै जाने हो । पानी जम्न सक्ने सबै स्रोत अन्त्य गर्ने हो । निम्ट्यान्नै पार्ने हो । पानी जम्ने टायर फाल्ने हो । ट्वाक फाल्ने हो । झार उखेल्ने हो । खाल्डा पुर्ने हो । अर्थात लामखुट्टे मार्ने हो ।
भरतपुर महानगरले गरेको ¥यालीको कामै नभएको होइन । तर, यतिखेर यसमा अल्झिने होइन । महानगरले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर लामखुट्टेको सत्यानाश गर्ने हो । संयन्त्र कुन ? वडा समिति । टोल विकास समिति । टोल सुधार समिति । यस्तै–यस्तै । अरु पनि छन् । आमा समूह । युवा क्लब । सामाजिक संस्था । गैरसरकारी संस्था । सबैलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । सकिन्छ होइन, गर्ने नै हो । कीटको चरम अभाव छ । समस्या समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो । अर्थात एक्सनमा जाने हो ।
डेंगे के हो ? के होइन ?
डेंगे एकखालको मामुली ज्वरो हो । भाइराल ज्वरो । खासमा ठूलो केही होइन । अर्को हिसाबले ठूलै हो पनि । किन हो ? मान्छे नै मारिसक्यो त ! कसरी सानो कुरा हुन्छ ?
डेंगेको ठ्याक्कै उपचार पनि छैन । तर, यसले शरीरमा गर्ने क्षतिलाई टालटुल पार्ने हो । आफूलाई कमजोर हुन नदिने हो । झोलिलो कुरा खाने हो । ज्वरो निको पार्ने हो । आराम गर्ने हो ।
डेंगे हाम्रै कारणले लाग्छ । हाम्रै कारणले फैलिन्छ । हाम्रै कारण हामी संक्रमित हुन्छौं । हामी हेलचेक्राइँ गर्छौं । बच्ने प्रयास नै गर्दैनौं । अर्थात घर वरिपरि सरसफाइ गर्दैनौं । पानी जम्ने खाल्डो पुर्दैनौं । लामखुट्टे नाश गर्दैनौं । अनि कसरी हुन्छौं हामी सुरक्षित ? कसरी जोगिन्छौं हामी रोगबाट ?
डेंगेबाट अब कोही अछूतो रहेन । कुनै ठाउँ बचेन । कुनै मौसम बाँकी रहेन । देशभर, वर्षभर । जहाँ जहिले पनि देखिने भो डेंगे । अर्थात लामखुट्टे । कालो सेतो टाटे लामखुट्टे । एडिस एजिप्टाइ जातको । यसले दिनमा टोक्छ । उज्यालोमा । राति कता जान्छ कुन्नि ?
अनौठो अर्को पन छ, पोथीले मात्रै सार्छ डेंगे । सार्नलाई डेंगे संक्रमितलाई टोकेको हुनुपर्छ । अर्थात संक्रमित रगत चुसेर स्वस्थ मानिसको रगतमा लगी मिसाउनुपर्छ । अनि लाग्छ थप एकलाई डेंगे !
कयौं ठाउँमा कीट अभाव छ रे । चितवनमा त चरम ! कीट भनेको डेंगे हो कि होइन भने पहिचान गर्ने कुरा हो । अर्थात परीक्षण गर्ने औषधि । परीक्षण गर्नै नपाएपछि कसरी थाहा पाउनु संक्रमण ! कसरी गर्नु उपचार ! अनि त अन्धाधुन्ध हुने भो । महामारी बन्ने भो । समस्या पर्ने भो !
डेंगे ज्वरोबाट जोगिनका लागि एकमात्र सर्त लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु हो । त्यसका लागि सरसफाइ पहिलो सर्त हो । सरसफाइ गर्दागर्दै लामखुट्टे आए टोकाइबाट जोगिन झूल टाँगेर सुत्नु सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हो । सफा पानी जमेको देख्नेबित्तिकै हटाउनुप¥यो । स्रोत नै अन्त्य गरेपछि बढ्न पाउँदैन ।
लामखुट्टेले आफ्नो जीवनकालमा हजारौं फुल पार्न सक्छ । त्यसबाट लार्भा बन्छ । लार्भा विकसित भएर लामखुट्टे बन्छ । फुल पार्नै नदिने । लार्भा बन्नै नदिने । अर्थात लामखुट्टे बन्नै नदिने । अनि सकिन्छ लामखुट्टे । त्यसै गरौं ।
हाम्रो भूमिका त यस्तो भयो । समाजको भूमिका चाहिन्छ । सरकारको भूमिका चाहिन्छ । टोलको भूमिका चाहिन्छ । सामाजिक संस्थाको भूमिका चाहिन्छ । गैरसरकारी संस्थाको भूमिका चाहिन्छ । जति भने पनि तपाईंलाई जोगाउने आफैंले हो । आफैंले होशियारी अपनाएर मात्रै आफू जोगिन्छौं ।
आफ्नो घर आसपास अरुले आएर सफा गरिदिने होइन । सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने होइन । अनेक अभियन्ता आउनै पर्ने होइन । आफ्नो घर आँगन आफैंले सफा गर्न सक्छौं । आँगन पुर्न सक्छौं । करेसा पुर्न सक्छौं । घरभित्रै पानी जम्न सक्ने ठाउँहरुको स्रोत नाश गर्न सक्छौं । त्यसै गरौं ।
गमला, फुलदानी, खाली बट्टा, अल्कत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरु, गाडीको काम नलाग्ने टायरमा जमेका पानीमा यसले फुल पार्छ । पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्न, कूलरमा जम्मा भएको पानी सफा गर्न सबै सचेत भयौं भने लामखुट्टेको स्रोत नै अन्त्य भएर जान्छ ।
डेंगे १, डेंगे २, डेंगे ३ र डेंगे ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । एडिस एजिप्टाई लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ । औलो उत्पन्न गर्ने लामुखट्टे फोहर पानीमा पाइने भएपनि डेंगे सार्ने लामखुट्टेले थुप्रै दिनदेखि हलचल नभएको स्वच्छ पानीमा फुल पार्छ ।
डेंगे रोग क्लासिक डेंगे, हेमोरेजिक र साक सिन्ड्रोमगरी तीन प्रकारका हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । क्लासिक डेंगे सामान्य प्रकारको डेंगे हो । यो आफंै निको हुन्छ, मृत्युको सम्भावना कम हुन्छ । तर, यदि कुनै व्यक्तिलाई डेंगे हेमोरेजिक ज्वरो वा डेंगे साक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको उचित प्रकारले उपचार नगरे मृत्यु हुन सक्छ ।
ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुपर्छ तथा प्रशस्त झोल पदार्थ खानुपर्छ । तर, ज्वरो घटाउने भनेर एस्पीरीन तथा आईबुप्रोफेन भने खान हुँदैन । डेंगे ज्वरोविरुद्धको खोप तथा खास उपचारसमेत नभएको हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यस रोगको बचावटको मुख्य उपाय हो ।
कसरी थाहा पाउने डेंगे भएको ?
विशेषगरी जेठदेखि भदौसम्म लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको खतरा बढी हुन्छ । यो समयमा अकस्मात चर्को ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, कम्मर दुख्ने, मांशपेसी तथा हड्डी अत्यधिक दुख्ने लक्षणहरु यसका हुन्छन् । आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, शरीरमा विमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ । यदि तपाईंलाई वा तपाईंका कोही आफन्तलाई यस्ता लक्षण देखियो भने तुरुन्तै अस्पताल जानुस् । डेंगे परीक्षण गर्नुस् । औषधि चलाइहाल्नोस् ।
डेंगेबाट बच्न के गर्ने ?
विभिन्न चिकित्सकसँग कुरा गर्दा तथा यससम्बन्धी विभिन्न आलेखहरु अध्ययन गर्दा डेंगेबाट जोगिन यी सावधानी अपनाउनुपर्ने रहेछ ।
–डेंगे ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नु पर्छ ।
–पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला, फुलदान, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गाडीका काम नलाग्ने टायरहरू आदिमा पानी जम्न नदिने ।
–पानीको ट्यांकीलाई लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरी छोपेर राख्ने ।
–कूलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने ।
–फुलदानीमा रहेको पानी हप्तामा दुई पटक फेर्ने ।
–यस लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ ।
–सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झूल प्रयोग गर्नुपर्छ, साथै साना केटाकेटीलाई जुनसुकै समयमा पनि झूलभित्र सुताउनु पर्दछ ।
–लमखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मह्लम दल्न पनि सकिन्छ ।
–घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुर्ने गर्नुपर्छ ।